August 8, 2019 - Myitter
August 8, 2019 Myitter 0
မနေ့ ညက..သခင်မြပန်းခြံကနေ ဌာနလမ်းကို အောက်ကြည်မြင့်တိုင် လမ်း အတိုင်း လမ်းလျှောက်ပြန်တယ်။ ည ၁ နာရီလောက်၊ မိုးက ဖွဲဖွဲရွာနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထီးလေးဆောင်းပြီးခပ်သုတ်သုတ်ပြန်တာပေါ့။ ဂျမခါနာ အကျော်ရောက်တော့လမ်းမီးက နီကျင်ကျင်နဲ့။ မီးတိုင်ကို အကျော်မှာကျွန်တော့်နောက်ကနေ အရိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်။ အရိပ်က…လူက ကလေးကိုယ်လုံး၊​ခေါင်းကြီးက အကြီးကြီးပဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ ခေါင်းဒီလောက် အကြီးကြီးကိုထိန်းလျှောက်နိုင်တဲ့ […]
ဗဟုသုတ ရရှိစေမည့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထန်းလျက် သာကူ/သကြား သာကူ နှင့် သာကူစေ့ပါဝင်သော အစားအစာတွေ အများအားဖြင့် စားသုံးဖူးကြပါတယ်။သာကူစေ့ကို saksak, rabia ,sago and sagu ဆိုပြီး ရေးသားခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…သာကူစေ့ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်သလဲ..သာကူစေ့အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း(raw materials)ကို ဘယ်ကရသလဲ […]
အမောလည်းပျောက် အားလည်းရှိမဲ့ ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ… ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစတွေကပါသေးတယ်။. မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်း အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည့်။ ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့် ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့်။ ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်အောက်မီးနှင့်ကြက်ဥကိုပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စားအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည် OK Maung Copied by LaWoneEain […]
မြောင်း မြ ပဇ္ဇောတာရုံစာသင်တိုက်ကြီးဟာ တချိန်က ဧရာဝတီတိုင်းမှာ စာသင်သား အများဆုံးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ စာသင်တိုက်ကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု စာသင်သား မရှိတော့ဘူး တဲ့… ပဲခူး ကြခတ်ဝိုင်း စာသင်တိုက်ကြီးဟာ တချိန်က စာသင်သား ထောင်ကျော်ရှိတဲ့…. စာသင်တိုက်ကြီးပါ အခု သုံးလေးရာပဲ ရှိတော့ တယ် တဲ့… […]
နည်းနည်းတော့အားယားလို့ ဟောင်ပါရစေ ပညာရေးဝန်ကြီး ကိုမျိုးသိန်းရေ တောင်ပြုံးပွဲတော်ကို သွားပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေသွားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဆိုတော့ ဒီညွန်ကြားချက်က ဝန်ြ်ကီးဌာနကတဆင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှုးကိုထုတ်တာဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာက မယောင်ရာဆီးလူးသလိုဖြစ်နေပြီဗျ ။ ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်းရောရောက်ဆိုတဲ့အတွေးမ်ျိုးလား ငါတို့ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ရင် လိုက်နာရမယ် သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ဆိုရင်တောင် လိုက်နာရမဲ့သဘောဆိုက်နေပြီ ။ ဟာ ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ သူဆန်စားရဲရမှာပေါ့လို့ […]
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့ တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်း စိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ နှုတ်ခမ်း အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့မှဲ့ အရမ်းကို […]
အနမ်းမိုးတွေရွာရင်း ဂုန်းကျော် တံတားပေါ်က အားလွန်ပြုတ်ကျတဲ့ စုံတွဲရဲ့အဖြစ်ဆိုး(ရုပ်သံ)
ပီရူးနိုင်ငံက စုံတွဲတစ်တွဲဟာ တံတားတစ်ခုပေါ်မှာ အနမ်းတွေဖလှယ်ခဲ့ရာ၊ အားလွန်ပြုတ်ကျပြီး နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို နာမည်တွေကတော့ Maybeth Espinoz (၃၄)နှစ်နဲ့၊ Hector Vidal (၃၆)နှစ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ Cusco မြို့က Bethlehem တံတားမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့စုံတွဲဟာ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို အပြည့်အဝ […]
( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ..
( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါ လက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ဖြစ်ပါတယ် ဝမ်းသာတယ်ဗျို့အရမ်းဝမ်းသာတယ် ဦးကံ မင်္ဂလာပါ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသောအခါရက်ကောင်းရက်မြတ်များကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန်ဆရာမင်းသုခကိုယ်တိုင်ရေးသားတွက်ချက်ပြီး ရေးသားပြုစုပေးလိုက်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like & share […]
တစ်မိနစ်မှာ စက္ကန့််၆၀ ဘာလို့ရှိနေတာလဲ မေးလာရင် ဖြေတတ်ဖို့
” ကင်ဆာသမားတွေ ထီပေါက်သထက် ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့ သတင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်များဖွင့်ဟလိုက်ပြီ ”